Chrome बाट इन्टरनेट एक्सप्लोरर अन्तर्गत कसरी तपाइँको वेबसाइटको परिक्षण गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर एक बढ्दो कम प्रयोग हुने वेब ब्राउजर हो, तर सत्य भन्नको लागि, त्यहाँ अझै धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले यसलाई दैनिक प्रयोग गर्छन्। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो वेबसाइट कसरी इन्टरनेट एक्सप्लोरर मा देखिन्छ जान्नुहोस्.
कहिले हामीसँग माइक्रोसफ्टबाट पनि एज छ विन्डोज १० मा, क्रोम वा फायरफक्स जस्ता अन्य मान्यता प्राप्तहरू जस्तै, इन्टरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर हो जुन टाढा जाँदैन जस्तो देखिदैन। र अधिक जबकि धेरै प्रयोगकर्ताहरू यसलाई प्रयोग गर्न जारी राख्छन्।
कसरी तपाइँको वेबसाइट इन्टरनेट एक्सप्लोरर अन्तर्गत जाँच्न
La कुरा एकदम सजिलो छ र हामी के गर्न जाँदैछौं भनेर क्रोम ब्राउजरको लागि एक विस्तार स्थापना गर्नु हो जसले हामीलाई हाम्रो वेब डिजाइनलाई ट्याबमा जाँच गर्न अनुमति दिनेछ जुन ईन्टरनेट एक्सप्लोरर अन्तर्गत हुनेछ।
हामीले चयन गर्न सक्ने केही विकल्पहरू मध्ये मापदण्डहरू छन् जस अन्तर्गत यो प्रदर्शन गरिनेछ रेन्डरिंग। यसले हामीलाई इन्टरनेट एक्स्प्लोररको आईई as को संस्करणको साथ कम्प्याटिबिलिटी परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ।
हामी क्रोम डाउनलोड गर्दछौं र हामीले त्यसलाई स्थापित गर्‍यौं यदि यो हाम्रो मुख्य वेब ब्राउजर थिएन भने।
हामी जाँदै छौं यो लिङ्क: आईई ट्याब.
हामी Chrome मा एक्सटेन्सन थप्छौं र हामीसँग यो काम गर्न तयार हुनेछ।
हामी केवल गर्न छ आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् हामीले स्क्रिनको माथिल्लो दाहिने भागमा अवस्थित छौं।
यस तरिकाले, हामी हासिल गर्नेछौं इन्टरनेट एक्सप्लोरर अन्तर्गत वेब पृष्ठ रेन्डर फ्ल्यासमा
यस विकास वातावरण पहुँच गर्न एक उत्तम तरिका फायरफक्समा पहिले नै उपस्थित थियो। केवल एक चीज हुन्छ जुन भर्खरको संस्करणहरूमा इन्टरनेट एक्सप्लोरर अन्तर्गत ट्याबमा परीक्षण गर्न सक्षम हुने प्रकार्य असक्षम पारियो।
सधैं जस्तो, को अनमोल सहयोग तेस्रो-पार्टी विकासकर्ताहरूले हामीलाई पहुँच गर्न अनुमति दिए सबै प्रकारका प्रकार्यहरू जुन ठूला ब्रान्डले छोडिन्छ वा उनीहरूले बुझे कि यो अब समर्थन गर्न लायक छैन। हामी तपाईंलाई साथमा छोड्दछौं क्रोमका लागि विषयवस्तुहरूको श्रृंखला.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » Chrome का लागि यो विस्तारको साथ तपाईं आफ्नो वेबसाइट कसरी इन्टरनेट एक्सप्लोररमा देखिनुहुन्छ भनेर परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ
बोर्जा गिल्ला भन्यो
उनीहरूले के गर्नुपर्दछ यस ब्राउजरलाई साँच्चिकै उपयोगी बनाउँदछ। यद्यपि यो "एज" मा विकसित भएको छ, के यो अझै प्रतिस्पर्धा भन्दा पछाडि छ?
बोर्जा गिल्लालाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ यदि यो माइक्रोसफ्ट मा छ, तिनीहरूले यसलाई हटाउनु पर्छ :)